WordPress Chengetedzo uye Chengetedzo | Martech Zone
Yedu saiti inogarwa pa Flywheel uye isu tiri zvakare vanobatana nekuti isu tinotenda kuti ndiyo yakanakisa WordPress yekutambira chikuva papasi. Nekuda kwekuzivikanwa kweWordPress, chave chinhu chinozivikanwa chevabambi. Izvo hazvireve kuti haigone kuve yakachengeteka chikuva, hazvo, zvinongoreva kuti zviri mune wese mushandisi anofarira kuona kuti vanochengeta chikuva, plugins uye chengetedza yavo saiti yakachengeteka. Tinorega Flywheel ita zvakawanda zveizvi kwatiri!
WordPress ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa zvemukati manejimendi manejimendi (CMS) mukushandisa uye kwakatenderedza 17% yewebhusaiti aripo padandemutande mazuva ano anofambiswa neCMS iyi. Nekukura kwekushandisa kweWordPress kuchengetedzwa kwayo uye kuchengetedzeka kwavewo imwe yenyaya huru dzekugadzirisa. Mugore ra2011 anopfuura zana nemakumi mana nematanhatu emasaiti ekudhinda mazwi akabiwa uye nhamba iyi yakasvika ku144,000 mugore ra170,000.
WPTemplate yakaisa pamwechete yakazara infographic yeWordPress uye akanakisa maitiro ekuti ungachengetedze sei zvakachengeteka.
Tags: sucuriWordPress rakabviswawordpress chengetedzowordpress kuchengetedzeka
WHYAnalytics: Ndiani Ari Kushanyira Saiti Yako?